Kuratidza zvinyorwa neelebheri dombo guta
Drábské světničky ndiko kusara kwedzimba yekutanga yematanda pamadziro ejecha munzvimbo ye cadastral Dneboh mudunhu reMladá Boleslav, 4 km kumabvazuva kweMunich Hradiště. Inowanikwa munzvimbo yakadzivirirwa yeBohemian Paradise, munzvimbo yeNESA 2000 hurongwa hwekukosha kweEurope uye yakasikwa Příhrazské skály. Iyo dombo nhare yakavakwa kumusoro-kumadokero pamucheto wechipata chinonzi Hrada panzvimbo yakakura kusvika 370 m asl (105–155 m pamusoro peRwizi rweJizera). Imba iyi yachengetedzwa kubvira 1958 sechimwe chikamu chikuru chetsika isingasimudzike, kusanganisira iyo nzvimbo yakafara yeHradiště chikomo neKlamorná iri padyo. Muridzi wevhu nenzvimbo dzechigaro ndeye Czech Republic, iko kutungamira nekutarisira kweiyo chivimbo chinopihwa naLesy České republiky.
Maererano nezvinyorwa zvekuchera matongo, chigaro chakasimbiswa chezita risingazivikanwe chakavambwa pane imwe nguva yechipiri yezana ramakore regumi nematatu, panguva yakakosha yekuita colonization yevaCistercians veHradiště. Drábské světničky neKlamorná iri pedyo uye kurongedzerwa kwaStaré Hrady pedyo nePříhraz pakutanga yakamboshanda se…
Besedické skály inzvimbo ine matombo muNzvimbo Yakadzivirirwa ye Český ráj, iri panharaunda yekumaodzanyemba nekumaodzanyemba kweSokol Hill (562 m) pamusoro peJizera Valley, padyo nemusha weBesedice. Iyo ine matombo matatu emaguta - Besedického, Kalich uye Chléviště.
Besedice Rock City - iri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwenzvimbo iyi uye shongwe dzayo dzinosvika kusvika pamamita gumi. Iko kune zvakare nzvimbo yekutarisa Vysoká skála ine maonero ematombo eKlokočské uye Trosky.
Dombo dhiza Kalich - inotora nzvimbo yekumaodzanyemba kwematombo uye inoratidzwa nedombo niches uye rakaputsika matombo. Iyo inosanganisirawo yaimbova dombo chapel neatari kubva 1634 inoratidzwa mavhesi uye chalices. Mushure meGomo reWhite, hama dzeCzech dzakange dzakahwanda mumatombo nekunamata kwakaitwa pano. Mavhesi akanyorwa pano anouya kubva kuna JA Komenský's Kšaft, Bhaibheri reKralická nemunyori waFrancis J. Vitásek.
Chléviště Rock Town - ndiyo hombe pamataundi matatu edombo muBededické Rocks uye inogara kumawodzanyemba kweSokol. Iyo inoratidzirwa kunyanya nematombo edombo nekureba kweanopfuura makumi maviri…
Besedické skály inzvimbo ine mabwe muPLA Bohemian Paradise, iri panharaunda yekumaodzanyemba nekumaodzanyemba kwegomo reSokol (562 m) pamusoro pemupata weJizera, padyo nemusha weBededice. Iyo ine matombo matatu emaguta - Besedického, Kalich uye Chléviště. Besedice Rock City - iri munzvimbo iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenzvimbo iyi uye shongwe dzayo dzinosvika gumi pamamita. Iko kune zvakare nzvimbo yekutarisa Vysoká skála ine maonero ematombo eKlokočské uye Trosky. Dombo dhiza Kalich - inotora nzvimbo yekumaodzanyemba kwematombo uye inoratidzwa zvakanyanya nedombo niches uye rakaputsika matombo. Inosanganisirawo yekare imba yekunamatira dombo neatari kubva 10 inoratidzwa mavhesi uye chalices. Mushure meGomo reWhite, hama dzeCzech dzakange dzakahwanda mumatombo nekunamata kwakaitwa pano. Mavhesi akanyorwa pano anouya kubva kuna JA Komenský's Kšaft, Bhaibheri reKralická uye mumiririri waFrancis J. Vitásek. Chléviště Rock Town - ndiyo hombe pamataundi matatu edombo muBededické Rocks uye inogara kumawodzanyemba kweSokol. Iyo inoratidzirwa kunyanya neyakavakirwa nematombo ane kukwirira kweanopfuura makumi maviri…